Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio A2 - Manuals +
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio A2
Posted byfazlul Aogositra 24, 2020 Aogositra 24, 2020 Leave a comment ao amin'ny Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio A2
Home » Bluedio » Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio A2
Fandraisana an-tsarimihetsika Bluedio
Tongasoa eto amin'ny telefaona vaovao an'ny Bluedio
Ankasitrahanay ny safidinao amin'ny telefaona Bluedio. Alohan'ny hampiasana dia vakio azafady ity boky torolàlana ho an'ny mpampiasa ity ary tazomy mba hojerena amin'ny ho avy.
Azonao atao ny mahita ny kaody fanamarinana amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fonosana amin'ny marika fiarovana izay mifatotra amin'ny fonosana voalohany. Ampidiro ao amin'ny tranokalanay ofisialy ny kaody: www.bluedio.com ho fanamarinana ny fividianana.
Mianara bebe kokoa ary mahazoa fanampiana
Tongasoa eto hitsidika ny tranokalanay ofisialy: www.bluedio.com;
Na handefa mailaka anay [email voaaro];
Na hiantso anay amin'ny 020-86062626-835.
Fampahalalana lehibe momba ny fiarovana
AZA mampiasa ny headphones amin'ny volume avo mandritra ny fotoana maharitra mba hisorohana ny fahasimban'ny sofina.
AZA mampiasa ny headphones mandritra ny fitondrana fiara na amin'ny tontolo iainana izay mitaky ny sainao manontolo. Raha ilaina dia ampiasao ny headphones serasera Bluedio.
Aza hadino amin'ny ankizy ny headphone, kojakoja ary kojakoja fonosana Ole mba tsy ho tratry ny ankizy hisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy ny loza mitatao.
Ajanony avy hatrany ny fampiasana ny headphone raha mahatsapa ianao fa marary mandritra ny fakan-tsarimihetsika.
AZA aseho amin'ny hafanana avo na avo be ny headphone Ole (mety: 1 O ”C ka hatramin'ny 35 ″ C).
Ataovy maina foana ny headphone ary AZA ampiasaina eo akaikin'ny rano ny headphone.
Ny fanesorana ny bateria tsy andoavam-bola Ole ao amin'ny headphone Ole dia tsy maintsy arahin'asa matihanina mahay. AZA manandrana manolo ny bateria anao samirery.
Topimaso amin'ny headphone
Ao anaty boaty
Power Power: Tsindrio ary tazomy ny bokotra MF mandra-pahazavana haingana ny jiro manga.
Vonoina herinaratra: tsindrio ary tazomy ny bokotra Ole MF mandra-pahatongan'i U, ary manjelatra haingana ny jiro manga avy eo maty.
Pairing: Rehefa maty ny telefaona dia tsindrio ary tazomy ny bokotra MF mandra-pahitanao ny fijanonan'ny jiro Ole.
Rehefa milalao mozika dia tsindrio ny bokotra MF indray mandeha hijanonana / Play;
Mahazo antso tonga, tsindrio ny bokotra MF indray mandeha hamaly / Hamarana; Tsindrio ary tazomy mandritra ny 2 segondra handavana;
Ny fahazoana ny Call 2 amin'ny Call 1, kitiho ary tazomy ny bokotra MF hitazonana ny Call 1 ary valio ny Call 2; tsindrio ary tazomy indray mba hiverenana mankany amin'ny Call 1; tsindrio indray mandeha hamaranana ny antso;
Tsindrio ny bokotra MF indroa mba hamerenana mandefa ny laharana farany.
Rehefa tonga ny antso dia handefa ho azy ny nomeraon-telefaona ny headphone.
Ataovy ao anaty paozy ny fakan-tsarimihetsika (jereo ny torolàlana "bokotra MF"), ary alefa ny fampiasa Bluetooth an'ny telefaonao, safidio ny "A • (ampidiro" oooo "raha ilaina). Rehefa vita soa aman-tsara dia ho hitanao fa manjelanjelatra ny jiro manga. Amin'ny manaraka dia esory fotsiny ny écouteur sy ny endri-javatra Bluetooth an'ny findainao, dia hifandray ho azy amin'ny findainao izy io.
Fanamarihana: Raha tsy mahomby ny pairing ao anatin'ny 2 minitra dia avereno azafady ireo dingana etsy ambony mba hiaraka indray.
Volume- / Track teo aloha
Tsindrio indray mandeha mba hampihenana ny habetsahana; tsindrio ary tazomy mba hitsambikina ny lalana teo aloha.
Volana + / lalana manaraka
Tsindrio indray mandeha hanampiana ny habetsahan'ny feo; tsindrio ary tazomy mba hitsambikina amin'ny làlana manaraka.
Alefaso aloha ny headphones. avy eo tsindrio ny bokotra MF sy ny bokotra Volume- indray mandeha, hamoaka feo haingana mifandraika izany. Misy fiteny 4 misy, ao anatin'izany ny sinoa, anglisy, frantsay ary espaniola.
Mitete / mamono ny feo 3D
ON: Tsindrio indray mandeha ny bokotra Volume + sy bokotra Volume-;
eny; Rehefa eo ny feo 30 dia tsindrio miaraka indray ny bokotra Volume + sy ny bokotra Volume.
Famerenana mozika an-tsipika
Ampiasao ny tariby audio 3.5mm mahazatra hampifandray ireo headphones amin'ny telefaona findainao na solosainao.
Fanamarihana: Esory ny headphones alohan'ny hampiasana an'ity endri-javatra ity.
Famerenana mozika tsipika
Rehefa milalao mozika amin'ny alàlan'ny Bluetooth ianao dia ampiasao ny tariby audio 3.5mm hampifandraisana A miaraka am-peo.
Mifandraisa amina telefaona finday roa amin'ny alàlan'ny Bluetooth
Ampifandraiso ny A miaraka amin'ny telefaona 1, ary vonoy ny A sy ny fiasa Bluetooth an'ny telefaona 1.
Alefaso A ary ampidiro amin'ny fomba fampifangaroana.
Ampifandraiso A amin'ny telefaona 2.
Alefaso ny fiasa Bluetooth an'ny telefaona 1, safidio ny "A" ao amin'ny lisitra Bluetooth.
Charger sy bateria
Tariby fametahana: azafady ampiasao ny tariby famandrihana USB ampidirina hofenoina ny bateria, na mety hanimba ny telefaona an-telefaona izany.
USB wall Charger: raha mampiasa charger rindrina USB ianao dia mila 5VDC,> 0.4A ny vokatra.
Ampidiro ny telefaona an-telefaona
Ny batterie namboarina dia azo averina indray ary tsy azo esorina. Aza manandrana manolo irery ny bateria.
Vonoy ny headphones alohan'ny famoahana azy.
Ampiasao ny tariby famandrihana USB ao anatiny mba hampifandray ireo headphones amin'ny solosaina na charger rindrina. Mandritra ny famandrihana dia mijanona hatrany ny jiro mena.
Manomeza ora 2 ho an'ny sarany feno. Raha vantany vao voadidy tanteraka dia hijanona ny jiro manga.
Fahita matetika amin'ny famindrana Bluetooth: 2.4GHz ka hatramin'ny 2.48GHz
Sehatra fiasa Bluetooth: hatramin'ny 33 metatra (habaka malalaka)
Mombamomba ny Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Valiny matetika: 20Hz-20,000Hz
Famahana audio: [email voaaro]
Mpamily: <1> 57mm
Fanaparitahana Harmonika (THD): 0.3% -3%
Haavo fanerena feo (SPL): 118dB
Fotoana hijerena: eo amin'ny 1300 ora
Fotoana mozika / resaka Bluetooth: 33 ora eo ho eo
Fotoana famandrihana: adiny 2 ho an'ny sarany feno
Ny halavan'ny mari-pana miasa: -10 ″ C ka hatramin'ny 50 ″ C ihany
Famakiana herinaratra / ankehitriny: 5V /> 400mA
Herin'ny famoahana: 25mW + 25mW
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio A2Download
Boky Torolàlana momba ny mpampiasa Bluedio Hi Modely momba ny torolàlana ho an'ny mpampiasa: Bluedio-Hi The Structure Diagram Instruction Operating: Pairing ...
Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio AS Mpampiasa US MANUAL Bluedio Speaker Model: AS Tongasoa eto amin'ny vaovao ...
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa US Bluedio Mpampiasa US MANUAL Bluedio Speaker Model: US Tongasoa eto amin'ny ...
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio TS3 USER MANUAL Bluedio Speaker Model: TS3 Tongasoa eto amin'ny ...
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio T2 USER MANUAL Bluedio Wired Headset Model: T2 Bluetooth 4.1 Headset ...
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio Ai USER MANUAL Modely Bluedio Headphones: Ai Tongasoa eto amin'ny ...
Posted byfazlul Aogositra 24, 2020 Aogositra 24, 2020 Posted inBluedioTags: A2, Bluedio, Bluedio A2, mpampiasa mpampiasa
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa US Bluedio
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Bluedio T4S
EDISION Torolàlana ho an'ny mpampiasa Digital Quad HDMI Modulator
STEPPERONLINE Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Stepper Digital
Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa APC Power Conditioner
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa tranga AZZA Mid Tower
Torolàlana momba ny jiro LED IKEA Omlopp LED
De on YCC365 Plus Manual - Torolàlana momba ny fakan-tsary
cynthia mckenzie on Boky torolalana momba ny torolàlana Watch Koretrak
Linda Lindsay-Vickery on Bissell Proheat 2x Revolution Manual
Pooja Gupta on Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Oxygère AccuMed
Anonymous on Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa braselet maranitra iTime Wearfit 2